Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo hoygiisa ugu tagay Guddoomiye Jawaari (sawiro) – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre oo hoygiisa ugu tagay Guddoomiye Jawaari (sawiro)
Abriil 12, 2018 5:06 b 0
Ra’iisul wasaaraha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay hoygiisa ku booqday guddoomiyaha xilka ka degaya ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ee is-casilay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa degan Villa Hargaysa ee magaalada Muqdisho, waxaana kulan dhexmaray labada masuul uu ku saabsanaa salaan iyo isa saamixid.
Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta oo Khamiis ah la filayaa inuu khudbad ka jeediyo xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho, isagoona halkaasi si rasmi ah xilka ku wareejin doono.
Mowshin ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka keeneen guddoomiye Jawaari ayaa horay loogu eedeeyey inuu ka dambeeyo raysul wasaare Xasan Cali Khayre oo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada ee xildhibaanada ah si’aad ah uga dhexmuuqday mowshinka.
Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya iyo Safiirka Talyaaniga oo arimo badan ka wada hadlay (sawiro)